Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Septambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Septambra, 2011
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Septambra, 2011
Tontolo Arabo: Loka Nobel Fandriampahalemana Ho An'ny Mpiserasera Niaro ny Revolisiona??
Ejipta 30 Septambra 2011
Nientanentana tanteraka ny Twitter tamin'ny alina noho ny anaran'ilay mpiserasera Arabo voatonotonina fa mety ho kandidà voafidy hahazo ny Loka Nobel Fandriampahalemana noho ny andraikitra nosahaniny nandritra ny Revolisiona Arabo. Ejyptiana Wael Ghonim (@Ghonim) sy Esraa Abdelfattah (@Esraa2008) miaraka amin'ny Hetsiky ny Tanora 6 Aprily, no natonin'ny mpanoratra Toniziana ao amin'ny Global Voices...
Iran: Fahatezerana Manoloana Ilay Lahatsary Mampiseho Fampijaliana Orsa
Iràna 28 Septambra 2011
Nanomboka ity raharaha ity raha namoaka lahatsary mampiseho “mpihaza” avy any Samirom faritanin'i Isfahan namono orsa volontany sy nampijaly ny zanany ho toy ny kilalao eo anoloan'ny fakantsary ny Fikambanana Iraniana mpiaro ny biby. Noloaran'izy ireo ny kibon'ny zanany iray ary natsipiny manodidina avy eo raha mbola velona ilay zavamananaina. Niteraka...
Jordana : Adin'ny MP (Mambran'ny Parlemanta) Amin'ny Tanora
Jordania 27 Septambra 2011
Ny fivorian'ny Antenimiera tao Amman, Jordana tamin'ity herinandro ity, no niatombohan'ny tsy fahafalian'ny mponina, indrindra teny anivon'ny vondrom-piarahamonin'ny tanora. Ireo tanora Jordaniana dia romotra be tao anatin'ilay adihevitra. Nanazava i Nadine Toukans.
Alzeria 26 Septambra 2011
Arabia Saodita : Nahazo Alàlana Hiditra Ho Ao Amin'ny Filankevitry Ny Shura Ny Vehivavy
Arabia Saodita 26 Septambra 2011
Ny Vehivavy Saodiana, izay tsy afaka ny hamily fiara any amin'ny firenena misy azy, dia hahazo aàlana ny hiditra ho mpikambana ao amin'ny filan-kevim-pirenen-dry zareo misy mpikambana 150 na ny Filan-kevitray ny Shura, rantsana mpanolotsaina izay misy fetrany ihany ny fahefany ao amin'ny governemanta sy ny fanaovan-dalàna. Noraisin'ny mponina an-kafaliana ilay fanapahan-kevitra.
Syria: Nosomparan'ny Anonymous ny vohikalam-panjakana
Syria 26 Septambra 2011
Voasovoka ny vohikalam-panjakana any amin'ny tanàndehibe Syriana rehetra noho ny asam-panafihana ataon'ny mpisovoka Anonymous amin'i Syria. Mifampizara pikantsarin'efijery amin'ny alalan'ny tenifototra #OpSyria ny mpisera
Tonizia: Noafahana i Samir Feriani mpitoroka
Tonizia 26 Septambra 2011
Noafahan'ny fitsarana ady miaramila ao Tonizia vonjimaika i Samir Feraini, mpiampanga, tamin'ny 22 Septambra, notazonina nanomboka tamin'ny 29 Mey 2011 izy, noho ny fanakianana nataony tamin'ny Minisitry ny Atitany Toniziana. Andro vitsy talohan'ny fisamborana azy, Andriamatoa Feriani, mpiasa-panjakana ambony tao amin'ny Minisiteran'ny Atitany, namoaka lahatsoratra roa tao amin'ny boky Al-Khabeer [Ar] (Ny Matihanina)...
Arabia Saodita 24 Septambra 2011
Niatrika fitsarana nasionaly tao Jeddah noho ny "faniratsirana ny fitsarana" ilay Saodiana mpiaro ny zon'olombelona, Waleed Abu Alkhair (@abualkhair) . Saodiana maro mpandefa tweet no niresaka ilay raharaha tao amin'ny Twitter mba hanehoana ny fanohanany sy hanakianana ny fomba fiasan'ny manampahefana manoloana ireo mafàna fo.
Tonizia: Mpitoraka Bilaogy Voadaroky Ny Mpitandro Filaminana Noho ny Fitantaràny Hatsikana
Tonizia 22 Septambra 2011
Valo volana taorian'ny naharava ny fitondran'i Ben Ali, mbola tsy nampiato ny herisetrany sy ny fanimbazimbany ny zon'olombelona ihany ireo mpitandro filaminana any Tonisia. Ny Alarobia, voasambotra sy voadaroky ny mpitandro filaminana i Azyz Amamy (@Azyyoz), mpitoraka bilaogy noho ny fitantarany hanihany momba ny akondro fony izy teny akaikin'ny tobin'ny mpitandro filaminana iray. Tohina ireo mpitoraka bilaogy.
Tonizia: Bilaogera Nirotsaka Hofidiana
Tonizia 21 Septambra 2011
Hifidy ny Antenimieran-dalampanorenana izay hiandraikitra ny famolavolana ny Lalamoanorenana vaovao ny Toniziana amin'ny 23 Oktobra ho avy izao . Hafa noho ny hatramin'izay ity fifidianana atao amin'ity taona ity izay matetika miafara amin'ny fahazoan'ny antokon'i Ben Ali vato eo amin'ny 90 isan-jato eo foana. Ho henjana tokoa ny fifidianana amin'ity...